ဤအားလပ်ရက်ရာသီ - ကျောင်းသားများအတွက်ပြသရန်နည်းလမ်း ၅ - ပညာရေးရှိ Austin Partners
သင့်ကိုကြီးပြင်းလာသူအားကူညီသူတစ် ဦး ဦး ကိုစဉ်းစားကြည့်ပါ။ သူတို့ကဆရာ၊ အိမ်နီးချင်း၊ မိဘ၊ လမ်းညွှန်၊ မိသားစုသူငယ်ချင်းဒါမှမဟုတ်နည်းပြဖြစ်နိုင်တယ်။ သင်မည်သူမည်ဝါဖြစ်ပါစေ၊ ကျောင်းသို့သင်ပြန်ကြည့်သောအခါသင့်အတွက်ပေါ်လွင်ထင်ရှားပြီးသင့်ကိုယုံကြည်သောသူများသည်ဒီပလိုမာအပြီး၌သင်နှင့်အတူနေထိုင်ကြသည်။
"သူမဟာကျောင်းကပျော်စရာကောင်းပြီးဆရာမလိုမျိုး" မင်းဖြစ်ချင်တာဘာမဆိုဖြစ်နိုင်တယ် "လို့ပြောခဲ့တယ်။ ၁၅ နှစ်ကြာပြီးနောက် Drew သည်မစ္စစတီဗင်ဆန်၏စာသင်ခန်းသို့ပြန်လာပြီးယခုအချိန်တွင်ထိရောက်သောဆရာတစ် ဦး ဖြစ်ရန်သင်ယူခဲ့သည်။ "သူမကကျွန်မကိုသူမရဲ့စာသင်ခန်းထဲဝင်ခွင့်ပေးပြီးကျွန်မကိုလမ်းညွှန်ပေးခဲ့တယ်" လို့ဒရူးကပြောပါတယ်။ ကလေးငယ်များအတွက်စံပြပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ဖြစ်ခြင်းသည်ဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်ရုံသာမကရေရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပုံကိုကျွန်ုပ်သိရှိခဲ့ရသည်။
Drew ကမစ္စစ်စတီဗင်ဆန်သည်သူမအတွက်လုပ်ဆောင်ပေးသကဲ့သို့နည်းတူတက်ခြင်းသည်ကျောင်းသားများအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိရန်အဓိကသော့ချက်ဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်သည်။ “ မင်းဟာပတ်ပတ်လည်မှာကပ်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ရမယ်၊ မင်းကမင်းအနားယူသွားရင်ကလေးရဲ့ဘဝကိုဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်မလဲ။ ” Drew သည်လွန်ခဲ့သောခြောက်နှစ်ကသူမက Tabitha ကိုစတင်လမ်းညွှန်သင်ကြားခဲ့ပြီးသူမသည်ခြောက်တန်းအထိဖြစ်သည်။ အခုတော့သူမဟာအထက်တန်းကျောင်းမှာအငယ်တန်းဖြစ်နေပြီ။ ကောလိပ်တက်ဖို့စီစဉ်နေပြီ။ တသမတ်တည်းပေါ်ပေါက်လာခြင်းအားဖြင့် Drew သည် Tabitha နှင့်ရင်းနှီးသောနှောင်ကြိုးဖွဲ့ထားပြီးသူမသူမကိုလမ်းတစ်လျှောက်ဘဝသင်ခန်းစာများစွာကိုသင်ကြားပေးခဲ့သည်ဟုဆိုသည် “ မင်းရဲ့ mentee ဆီကနေအများကြီးသင်ယူနိုင်တယ်။ “ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ဘဝဖြစ်ရတာထက်သူတို့ရဲ့ဘဝမှာနေထိုင်ရတာဟာအခွင့်ထူးတစ်ခုပါပဲ”
APIE တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပရိုဂရမ်မှတဆင့်နှစ်စဉ်ရာနှင့်ချီသော Austin ISD ကျောင်းသားများ၏ဘဝကိုအကျိုးသက်ရောက်ရန်အထူးအခွင့်အရေးရခဲ့သော်လည်းသင်မပါဘဲမဖြစ်နိုင်ပါ! ကျောင်းသားများအတွက်သင်ပြနိုင်သောငါးခုရှိသည်။
၁။ လှူဒါန်းပါ။ စဉ်းစားပါ ပေးကမ်းခြင်း သငျသညျကျောင်းသားတစ် ဦး ဖြစ်သည့်အခါသင်တို့အဘို့အပေါ်လာသူတစ် ဦး ချင်းစီ၏ဂုဏ်အသရေအတွက်။ သေးငယ်တဲ့လက်ဆောင်တွေတောင်မှလျင်မြန်စွာတက် add နိုင်ပါတယ်!
2. Austin Marathon အသင်းအတွက်ရန်ပုံငွေရှာဖွေပါ။ သင်ဟာအပြေးသမားပဲဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်ဖြစ်မင်းတို့ကိုမင်းလိုချင်ပါတယ် ငါတို့အသင်းအတွက်စာရင်းသွင်းပါစကားလုံးကိုဖြန့်ပြီးငါတို့နှင့်အတူရန်ပုံငွေရှာပါ! ဤအရာကိုပိုမိုလွယ်ကူစေရန်အတွက်အကြံဥာဏ်များနှင့်တင်းပလိတ်များကိုမျှဝေပေးရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အပြေးသမားများနှင့်လှူဒါန်းမှုများအချို့ကိုရရှိသည့်အခါ Austin Giles Miles Charity Chaser အစီအစဉ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ငွေပိုမိုရရှိရန်ဖြစ်လာသည်။ ပိုမိုလေ့လာလိုပါကကျွန်ုပ်တို့၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးမှူး Rachel Thomson သို့အီးမေးလ်ပို့ပါ rthomson@austinpartners.org
သင်၏မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းများနှင့်ကွန်ယက်ကို APIE အကြောင်းပြောပြပါ။ သင်၏လုပ်ငန်းနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအသိုင်းအဝိုင်းများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မစ်ရှင်များကိုမျှဝေခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်သောလုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်၍ အသိပညာတိုးပွားစေရန်ကူညီပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Austin အသိုင်းအဝိုင်းနှင့်အမြဲဆက်သွယ်မှုရရန်ကြိုးစားနေသည်၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အလားအလာရှိသောထောက်ခံသူများ၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ၊
၄။ လူမှုမီဒီယာတွင်ထောက်ခံမှုပြပါ။ လူမှုရေးမီဒီယာများတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ရေးသားချက်များကိုဝေဖန်ခြင်း၊ ဝေဖန်ခြင်းနှင့်ဝေမျှခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ရေးသားချက်များကိုကြည့်ရှု။ ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်အကြောင်းလေ့လာသူများပြားလာစေရန်ကူညီသည်။
၅။ အကယ်၍ သင်မဖြစ်သေးပါကစေတနာ့ဝန်ထမ်းခြင်းသည်ကျောင်းသားများအပေါ်သင်၏စိတ်အားထက်သန်မှုကိုအဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝသောလုပ်ဆောင်မှုအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲစေသောနည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အပတ်တိုင်းသင်၏အချိန်တစ်နာရီမျှသာ Austin ကျောင်းသားများအတွက်ကြီးမားသောခြားနားချက်ကိုပေးသည်။ မေးခွန်းများရှိပါသလားသို့မဟုတ်ပိုမိုလေ့လာလိုပါသလား။ ငါတို့လာကြည့်ပါ ဝဘ်ဆိုက် သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏စေတနာ့ဝန်ထမ်းစုဆောင်းရေးညှိနှိုင်းရေးမှူး Ashley Yeaman သို့အီးမေးလ်ပို့ပါ ayeaman@austinpartners.org.
ဒီအားလပ်ရက်ရာသီမှာမင်းတို့ဂရုစိုက်ရတဲ့အကြောင်းတရားများကိုဖော်ပြလိမ့်မယ်။ သင့်အတွက်ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သူများ၏ဂုဏ်အသရေအတွက် APIE အားသင့်အတွက်မည်သည့်ပုံသဏ္givingာန်မျှပေးရန်ပေးဆပ်ရန်စဉ်းစားပါ။ သင်၏လူပုဂ္ဂိုလ်နှင့်လူမှုရေးမီဒီယာများနှင့်သင့်အပေါ်သူတို့မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်သည်ကိုဝေမျှရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့တိုက်တွန်းပါသည်။ @austinpartners ကိုမှတ်ထားပါနှင့် hashtag #APIEshowsup ကိုသုံးပါ။ အတူတူကျွန်ုပ်တို့သည် Drew ကဲ့သို့ဂရုစိုက်တတ်သောပုဂ္ဂိုလ်များသည် Austin ကျောင်းသားများကိုထောက်ပံ့ရန်တက်တက်ကြွကြွလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
ရေးသားချက် - ရာခေလသွန်မ်ဆင်၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးညှိနှိုင်းရေးမှူးနှင့်အက်ရှလေယမန်၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့်စေတနာ့ ၀ န်ထမ်းခေါ်ယူမှုညှိနှိုင်းရေးမှူး
Prevရှေ့APIE ၏အချပ်: နိုဝင်ဘာလ 2019 သတင်းလွှာ
နောက်တစ်ခုစစ်မှန်သောဘဝရှိဆရာများ - Rick Schumacherနောက်တစ်ခု